के छ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको ७२ बुँदे पूर्णपाठमा? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारके छ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको ७२ बुँदे पूर्णपाठमा?
के छ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको ७२ बुँदे पूर्णपाठमा?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले ७२ विभिन्न बुँदामा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जाने कुरा लोकतन्त्रको विरुद्ध हुनै नसक्ने भन्दै चुनावमा जान आव्हान समेत गरेका छन्।